galmudugnews.com » Dadweyne saf u galay Xarumaha Dahabshiil si lacagtooda u qaataan ! maxaase ku dhacay?
Home » WARARKA » Dadweyne saf u galay Xarumaha Dahabshiil si lacagtooda u qaataan ! maxaase ku dhacay? Dadweyne saf u galay Xarumaha Dahabshiil si lacagtooda u qaataan ! maxaase ku dhacay? admin on
Apr 3rd, 2013 //
No Comment Views 164060Galmudugnews.com- Boqolaal qof ayaa hor tuban Xarumaha Xawaalada Dahabshiil ee Koofurta Somalia kuwaas oo dhamaantood guluf ugu jira inay lacagaha u yaal Bankiga iyo Xawaalada qaataan hasse yeeshee nasiib daro waxaa lagu wargeliyay in xaalad amaan darteed la xiray dhamaan Xarumaha Shirkadda.
Ganacsatadda iyo Dadweynaha argagaxsan ayaa badankood xalay hurda seexan kadib markii ay Warbaahinta ka maqleen in qarax weyn lala beegsaday Xaruntooda weyn ee Dahabshiil ku leedahay Muqdisho.
Saraakiisha amniyaadka Al-Shabaab Garabka Mukhtaar Roobow ayaa ku hanjabay inay weeraro ismiidaamina ku qaadi doonaan Xarumaha Dahabshiil hadii aysan todobaad gudahiis ku bixin lacagta Canshuurta ee lixdii biloodba mar ay bixin jireen.
Madaxa Amniyaadka Al-Shabaab Mahad Karataay ayaa sheegay in Dahabshiil bixisay Macluumaadka Akoontiyada madaxda Al-Shabaab taasna ay ogaadeen Waaxda Sirdoonka Xarakata Al-Shabaab.
“Lixdii bil waxay bixin jireen Nus Milyan Dollar,lacagtaasi waa diideen waxay dhaheen boqol kun dollar naga qaada ,waxaa taasi ka sii daran inay bixiyeen Macluumaadka Koontooyinka aanu ku laheyn Shirkadda ,oo waxaa loo gudbiyay kuwa isku sheega Golaha amaanka iyo Dowladaha gaalada”ayuu yiri Mahad Karataay.
Maleeshiyadda Al-Shabaab ayaa goboladda Shabeelada hoose,Hiiraan,Shabeelada dhexe ,Bay iyo Bakool ku daadiyay Warqado ay shacabka ugu sheegayaan inay Lacagahooda ka qaataan Shirkadda Dahabshiil.
Hiiraan,Bay iyo Bakool dhamaan Xarumaha ku yaal ayaa xiran iyadoo laamaha furan ee Shirkadana cabsi darteed dadweynahu geli karin.
“Walaahi waa arrin halis badan in Xarumaha Dahabshiil la galo maxaa yeelay nimankaan mar walba ayey isku dhex qarxin karaan” ayuu Mohamed Haji oo la hadlay Galmudugnews.com.
Saraakiisha Sirdoonka Dowladda Somalia iyo kuwa Ahlusuna ayaa xirida Dahabshiil iyo qaraxa lala beegsaday Xaruntooda weyn ku tilmaamay Riwaayad lagu qaldayo beesha Caalamka si Shirkadda looga badbaadiyo Xayiraad Caalamiya oo la hadal hayo in la saaro doono bisha Augusto 2013.
Xeeldheerayaal u dhuun daloola dhaqdhaqaaqyada Dahabshiil ayaa ku dooday inaysan jirin Riwaayad la jilayo balse xaqiiqadu tahay in Dahabshiil yareeysay lacagtii Al-Shabaab siin jirtay ee taageerada ahayd sidaas darteedna ay wada hadalo socdaan.
Xarumaha la xiray ee Dahabshiil iyo qaraxa weyn ee lala beegsaday Xarunta Muqdisho waxaa ka aamusay dhamaan Warbaahinta Muqdisho marka laga reebo Radio Muqdisho maxaa yeelay Warbaahinta waxay siiyaan lacag.
Warbaahinta ugu waaweyn Caalamka ayaa faafisay in la xiray Xarumaha Dahabshiil lana qarxiyay xarunta ugu weyn taas oo ka dhigan in Shirkadda magaceeda dhaawac weyn gaaray.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 136636 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31740 hitsContact US - 30230 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 25778 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25487 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25006 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23770 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 22799 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22237 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 21818 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21180 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 20894 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 20796 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20512 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19770 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19686 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19062 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18350 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17663 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17455 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17406 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16797 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16478 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15415 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15249 hits Home Contact US